Mikel Arteta oo ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda Arsenal kaddib guuldarradii Wolverhampton – Gool FM
Mikel Arteta oo ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda Arsenal kaddib guuldarradii Wolverhampton
(London) 30 Nof 2020. Arsenal ayaa u dhacday kaalinta 14-aad ee horyaalka Premier League, kaddib markii ay la kulmeen guuldarradoodii Shanaad ee xilli ciyaareedkan.
Laakiin tababare Mikel Arteta ayaa sheegay inuusan ka walwalayn inuu booskiisa waayo inkastoo uu si xun ku bilowday xilli ciyaareedkan.
Wolverhampton ayaa saddexda dhibcood kaga soo qaadatay Arsenal garoonkeeda Emirates, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, ciyaartan ayaana qeyb ka ahayd kulamada horyaalka Premier League ee Toddobaadkan.
Unai Emery ayaa laga ceyriyay shaqada tababaranimo ee kooxda Arsenal sanad ka hor markii kooxda reer London ay ku jirtay kaalinta siddeedaad, laakiin Arteta ayaa sheegay in diirada uu saarayo mustaqbalka kooxda, balse aanu ka fikiri doonin mustaqbalkiisa.
Kaddib ciyaarta tababare Mikel Arteta ayaa u sheegay warbaahinta:
“Waxaan garowsaday laga soo bilaabo maalintii aan noqday tababare in la ceyrin doono ama aan ka tagi karo kooxda, laakiin ma ogi waxa dhici doona.”
“Xirfaddan tababarnimo, waan ogahay inay tani dhici doonto, laakiin tani waxba igama khusayo.”
“Waxa kaliya ee aan xiiseynayo ayaa ah inaan helo qaab ciyaareedka ugu fiican ee ciyaartoyda isla markaana aan ugu adeego kooxda sida ugu macquulsan.”
“Waan garaaci karnaa koox kasta, laakiin sidoo kale waa nalaga badin karaa, sababtoo ah farqiga ayaa aad u yar.”
“Xaqiiqdii waxaan dooneynaa inaan dhalino goolal badan, waxaa na sugaya howl aad u adag.”
Si kastaba ha ahaatee, Arsenal ayaa laga badiyay 3-dii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ku ciyaartay garoonkeeda horyaalka Premier League, waxayna la kulantay bilowgii ugu xumaa ee xilli ciyaareed tan iyo xilli ciyaareedkii 1981-1982.
Mourinho oo u jawaabay Lampard... wuxuuna ammaanay maskaxda kooxda Tottenham
Kooxda Inter Milan oo bedelka Lautaro Martinez ka dhex aragta horyaalka Premier League